musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi Vanotamba Nhabvu Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Genius iyo inonyatsozivikanwa neNickname; "Emer". Our Emerson Palmieri Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehucheche kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye zvakawanda zvisingatauri pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvemaitiro ake ekutamba asi vashomanana vanofunga nezveEimerson Palmieri's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Emerson Palmieri dos Santos, anonzi Emerson Palmieri kana kuti Emerson chete akaberekwa musi we 3rd August 1994 muSantos, São Paulo, Brazil. Akaberekerwa amai vake veItaly, Eriana Palmieri nababa veBrazil, Reginaldo Alves dos Santos.
Emerson ane chizvarwa cheItaly pachigaro chaamai vake uye ave ari mugari weItaly kubvira muna March 2017. Akakurira nemukoma wake mukuru, Giovanni, uyo ariwo mutambi wemutambo anotamba akadzokera saiye. Emerson ave achida chikwata cheChirungu sezvo aive nemakore 15.
Akaita kutanga kwake kuSantos panguva ye16 mushure mekuuya kuburikidza nehutano hwevechidiki uye ne18 iye akazvisimbisa semunhu anogara ari muboka rekutanga, achida kuburikidza naye achikura kusvika kune imwe yepamusoro yekambani yebhola yepamutambo. VaScout vakatanga kumupoteredza sa shark kubva mushure mekunge vakunda 2013 Copa Sao Paulo de Futebol Junior yeSantotos U20. Icho chaiva mapurisa eParermo akazoita kuti aende kuEurope. Chisarudzo chake kune rumwe rutivi rweItaly chakauya kuburikidza nemufaro kuna amai vake vanobva kunyika. Emerson akashandisa mukana iwoyo kuti ave nehukama hwemhuri yake yakakura.
Chikwata cheItaly Palermo, uyo akamutora chikwereti kwekanguva ye 2014 / 15 nechisarudzo chokutenga. Zvinosuruvarisa, mikana yake yekuvhenekera yaiva shoma uye yakaparadzana nepakati uye shure kwekuita zvisikwa zvipfumbamwe chikwata chakanga chisingafungi sarudzo yekuita chibvumirano chacho chigarire.
Kurasikirwa kwaPalermo kwaive kuwanikwa kwevaRoma sezvavakatora iyo-21-year-old akweretesa kwenguva ye 2015 / 16. Akapedza nguva yake yokutanga kuScalidio Olimpico sokunyengedzera kwaLucas Digne, asi akaratidza kuvimbiswa kwakakwana kuti apiwe chikwereti chake chechikwereti kwenguva yakareba. Iyi ndiyo nguva Antonio Conte's Chelsea yakauya. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Zvose zviri nyore kuti ude murudo uye kubatwa mudutu remhepo yekufadzwa kwekuronga hupenyu 'pamwe chete nokusingaperi'. Iyi ndiyo mhedziso yaEmerson Palmieri uyo ave achiri nehutano hwake hwemucheche, Isadora Nascimento sezvo vose vari vaduku.
Emerson akasangana nemusikana wake wenguva refu Isadora Nascimento muBrazil, uye vaviri ava vave pamwe chete kubva ipapo. Bato Fans pavanoona zviri nyore kuona chiedza chaLatina, uyo akabvuma kuti anonyanya kutaura achiona Emerson achitamba.
Aimboti: "Pandinoenda kumitambo, ini ndiri, ane simba kwazvo, ndinopenga, zvose nokuda kwerudo rwehupenyu hwangu. Ndaigara ndichifarira bhora asi kwete zvakanyanya kutarisa. "
Emerson, uyo ane vateveri veChNUMX inowedzera uye anowanzopa mifananidzo ye rudo rwehupenyu hwake uyo anoita kunge ari murudo zvikuru uye anozvirumbidza kubudirira kwevanhu vake.
Isadora akambotaura nezvemufananidzo waEmerson achiti: "Anonyanya kudanana, akanaka kwazvo. Akagara achitaura zvinhu zvakanakisisa kwandiri, anoita zvinoshamisa zvandisingafungi kuti zvinogona kuitika, uye anondibata zvakanaka kwazvo. Ane hanya kwandiri uye nemhuri yangu. Ndichagara ndichikuda, Emerson! "
Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Emerson Palmieri ane unhu hunotevera kumunhu hwake.
Emerson Palmieri's Strengths: Arikusika, ane shungu, ane rupo, ane shungu-moyo uye anofara.
Unoshayiwa Emerson Palmieri: Anogona kuva ane manyawi, akaomeswa, akazvifunga, ane usimbe uye asingakwanisi.
Zvinorevei Emerson Palmieri: Kutanga, iye anoda ukama hwake naIsadora. Emer anodawo nzvimbo yake yemitambo, kutora mazororo, kutenga zvinhu zvinokosha zveIsadora, mavara akajeka uye kufara neshamwari.
Zvinorevei Emerson Palmieri: Kuregererwa, kutarisana nematambudziko echokwadi uye kusabatwa semambo.
Kunyangwe iye achiri achiri muduku, asi Emerson mutungamiri akazvarwa akazvarwa. Izvi hazvizivikanwi kune vakawanda. Iye anoshamisa, akasika, anozvivimba, ane simba uye akaoma zvikuru kurwisa. Emerson anokwanisa kuita chero chavanoda mune chero nzvimbo yehupenyu yavanozvipira. Pane simba rakananga kune rake "Mambo wesango" Status.
Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Yakatambidzana neNeymar
Hongu, sezvakambotaurwa kare, Emerson akaberekerwa muSantos, Sau Paulo, uye akabatana nevechiSantos yakagadzwa mu2009. Waizviziva here? ... Akapedza makore matanhatu nekirabhu uye achitamba pamwechete Neymar munguva yake nguva ikoko. Kubva ipapo, Emerson akatora chinhu kana maviri kubva kuBrazilian Golden Child.
Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Emerson anobva kune yepamusoro-kati yemhuri yebhola yebhola. Ichokwadi, haasi iye chete mutambi wemutambo ane zita rinonzi Palmieri. Inoratidzika sebhokisi rinomhanya mumhuri yake.
Imwe mukoma mukuru waEmerson Giovanni akaberekwa nevabereki vakangofanana nenguva yekunyora, iye zvino ari kutambira Fluminense muBrazil seNhamba yavo 6. Anoshandawo sekusara-shure uye akashandura zvishoma nezvimwe 100 kuonekwa neBrazilian club.
Giovani akafananidzirwa ari pamusoro pemakore mashanu kupfuura mukoma wake.
Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -His Style
Emmer muchecheti anonyatsogadzirisa zvikuru. Anogona kutamba kana kuruboshwe-kuruboshwe kana kuruboshwe rwemapapiro uye akatozadza nechepamusoro-shure panguva yake muRoma.
Emerson anoda kuenda mberi kunyange semudziviriri. Iye anonyatsozivikanwa nekuendesa nekurova murume wake. Izvi zvinoratidzira kufamba kwake kwakanakisisa, kuenzanisa uye samba-kufanana neunyanzvi hwokugadzirisa mukuita.
Pasinei nekumire pa 5ft 9in, haatyi kushandisa mufananidzo wake kumubatsiro wake. Emerson anokwanisa kukonzera madutu akawanda kubva parutivi rwake nekunyengera kwake.
Pane imwe mugumo wemunda, Emer akanakawo mune imwe-ye-imwe-mamiriro ezvinhu zvichienderana nekukurumidza kwake kumubvisa kunze kwemamiriro anonyadzisa. Asati asvika kuCentral, zvidzidzo zvake zvekudzivirirwa zvinobva zvakafanana zvakanakisisa nezvakanakisisa muSerie A.
Emerson Palmieri Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -International Career
Emerson yaimiririra Brazil pasi pe-17 panguva yeClnUMX South American Under-2011 Football Championship uye munguva yeFNUX FIFA U-17 World Cup, ichishandiswa korona yemashizha ekare. Akanga ari nyanzvi isingatauriki panguva yezvikwata zvose, achiisa chinangwa chairwisa Chile pa 2011 March 17.
Muna March 2017, mushure mokunge vava pedyo nekuwana chizvarwa cheItaly, Emerson akaudzwa kuti akatevedzwa nemudzidzisi mukuru weItaly Gian Piero Ventura nechinangwa chekutenderera pasi rose kuItaly. Iye akarota bhenji yakasvika musi we 29th waMarch 2017.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nokuverenga vedu Emerson Palmieri Childhood Story pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.